"Abbaan Koo Nama Umriin Waggaa Jaatamaa Olii Rasaasaan Yeroo Lama Rukutan." Ilmaa
Sambata Bitooteessa 10 bara 2018 Godina Boranaa Magaalaa Moyyalee keessatti namoota mada’an keessaa tokko Aaddee Shaallaa Kuulaa haadha ijoollee ja’a ti. Guyyaa sana raayyaan ittisa biyyaa dhukaasaa fi nama rukutaa dhufnaan sodaatanii ijoollee ofii wajjin manatti ol-deebi’uun balabala manaa ofii cufatan.
Sana booda “balbala cufamaa fi edeeda manaa keessan dhukaasuu jalqabanaan firaashii lafa bu’ee jiru irra ijoollee koo wajjiin gad ciifnee ituu jirru rasaasni na rukute” jedhu. Ijoollee koo na waliin turan shan lubbuu isaanii oolchuuf carraaqaa ture jedhu Aaddee Shaallaan.
Jiraattoota Moyyalee guyyaa sana ajjefaman keessaa tokko Kanuu Qancooroi Diidaa tokko. Abbaa ijoollee ja’aa turan. Guyyaa sana Kaaffee naannoo Shawaa Bar jedhamu-tti argamuu buna dhugaa turan. Achumaan waraanni biyyaa achi seenee ka’ii, harka kee ol qabii dhaabadhu eega jedhee rasaasa lamaan akka isa rukutan namni waliin ture nu ibseera jedha ilmii isaanii Abbduub.
Rasaasii inni duraa duubaan karaa saggoo haleelanii fuul duraan kokkee keessaan ba’e. Inni Kaan immo karaa fuula duraa naannoo qomaa rukurtanii duubaan ba’u ibsee jira.Abbaan isaa Obbo Kanuu Qoncooro Didaa umriin gara waggaa 60 ol ta’u kan ibse ilmii isaanii akka ilma angafaa ta’eetti maatii koo jajjabeesseen inni borii immoo harha waaqaa jira jedha.